Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): July 2012
at 7/29/2012 09:47:00 AM
12 New FBR teams graduate in Kachin State On 22 May 2012, 12 new teams graduated from Free Burma Rangers Leadership and Relief Team training, held in Kachin State. There were Kachin teams, an Arakan team,aTa’ang (Palaung) team and an All Burma Student Democratic Front (ABSDF) team. The teams were trained in many topics, including leadership, basic medical care, reporting, human rights documentation, video and digital camera use, land navigation and GPS use, landmine removal, Good Life Club and counseling, physical training, and rappelling. They then went onafollow-on mission in which they put on Good Life Club programs, treated patients, documented human rights violations and did reconnaissance missions of Burma Army activity in the mission area. Overall, they saw some 12,000 people, helped over 2,000 children, and recorded Burma Army activity at 15 different camps. We would like to thank the Kachin Independence Organization (KIO), the Kachin National Organization (KNO), WPN, the Morse family and Partners Relief and Development (PRAD) for their help and support of this training. Explaining the Gobal Day of Prayer for Burma to Kachin IDPs Good Life Club in Kachin State GLC team teaches health and anatomy ataprogram Arakan team member hands out beads duringaGLC program in Kachin State On 30 November 2011, the families in Zin Lu Ka Gi Village quickly packed what belongings they could carry and fled their village. The oncoming Burma Army troops, from Division 88, had 600 soldiers, with horses and mules for carrying supplies. The six houses of Zin Lu Ka Gi Village would not be an obstacle for this unit, which had already pushed through the defending Kachin Independence Army (KIA – pro-democracy resistance) soldiers. One resident interviewed by our teams, Nam Bauk, together with her husband, Ma La Mai Zau Tu, packed what she could. However, they were limited by also having to carry the youngest of their seven children, only one year old. They walked for an hour until they reachedaroad and then were able to make their way by foot and motorcycle close to Maija Yang where camps had been set up for people fleeing attacks. But November is cold and they realized they needed clothing and other things, especially for the baby. Ma La Mai Zau Tu decided to go back and see if he could safely retrieve some of their belongings. At some point after he left, his wife called him – only to have the phone answered byastrange voice,aman’s voice,avoice that spoke Burmese. The man laughed; he said he was havingadrink with her husband. He hung up. After several days of hearing nothing more, she called again. This time there was no joking on the other end: “Your husband is dead.” Later Ma La Mai Zau Tu’s father went back to see what he could find, to look for any final sign of – or maybe from – his son. All he found wasapile of the baby’s clothes strewn by the side of the road, where they had been dropped. Nam Bauk is now left with questions: “Why did they kill him? He wasn’tasoldier – he wasapastor.” She lives now in an IDP camp, ina3-by-3 meter cubicle, separated from her neighbors on three sides only byathin sheet of plywood. New to this situation, she is disbelieving that it can last long – she says, “This cannot happen in the future. The future will be better.” IDP girl looks out over IDP camp, built in the last several months A Ranger videos the remains ofavillager’s house, burned to the ground by Burma Army troops Nam Bauk was just one of thousands of people who came to eight Good Life Club programs conducted by the new FBR teams on this, their first mission. She and the many others like her whom we met and interviewed both challenged us in our mission and also deepened it as we were forced to go beyond simply providing help and consider what it really meant to give hope and love. Psalm 69 says we should praise and give thanks to the Lord, and that that act of worship is more to Him than things we have to offer – and it says that the poor also see this and are glad. What does this look like for us as we are confronted with the poor, and those ‘things’ seem like the best answer? The Psalm assures us the God hears the needy, and that in seeking God our hearts will live – but this wasaquestion that each team member had to ask and answer in their own hearts on this mission. FBR medic treating IDP woman with baby ataGLC program The mission began withaprogram atasmall Lisu village with around 20 children; the programs grew progressively until the largest program in Je Yang IDP Camp, with over 6000 people and around 800 children. By the arrival of the larger programs we were out of many of the gifts we usually give to the children, including bead bracelets and t-shirts. The big IDP camps providedalogistics and coordination challenge that seemed to grow with each succeeding program. As the team met to discuss the lack of supplies before the biggest program, at Je Yang Camp, it wasatime of assessment. Many other groups are helping in the camps. Many of them have lots of supplies. Church groups also are helping – the Kachin are mostly Christian – and these were very experienced in programs and singing. What did our teams have to offer? The team leaders talked, sharing frustration atalack of supplies, concern that we couldn’t give something to everyone, questions about how to manage so many children; they considered only giving the gifts of sports equipment that we had brought for the schools and not doingaprogram. And then, even with the prospect of facing, empty-handed, 800 children the next day, they decided, “We are bringing hope and love, we can do this without supplies, we only need to give what we have, give ourselves, give our love.” This was the hard choice, as many of them came to realize – in their final mission debrief many wrote that the mission was good, the programs were good – but that they required more unity, more participation, from the rangers. It was more difficult to give themselves, to give time, to engage, than to giveashirt oratoy. We are told to let God go before us and that He wants to lead us to abundant life. And I know that for the finale program, at Je Yang Camp, many things came together to make itagood day. The electricity from the nearby town was connected for the first time and we were able to useasound system. We were able to doarun for relief. The team was able to find enough juices and snacks to feed all the children – twice! The children were encouraged – something of hope and joy had been passed on – and the team hadarenewed faith in all aspects of their mission. Kachin State Run for Relief Racing to the finish in the Run for Relief Kachin State,6June 2012: The crowd lining the rocky dirt road, mostly small children and their mothers, cheered as the young first place runner, flip-flops in hand, sprinted to the finish. The other runners, girls and boys, followed; the small children, who had just run their own race, spilled into the road, and mothers with umbrellas to protect them from the afternoon sun milled around. The children of Je Yang IDP camp had just completed the first ever Kachin State Run for Relief. The Je Yang camp is one of the largest in Kachin State, with an IDP population of over 6000 people, with over 1000 children. On this day the Free Burma Rangers started the day withaGood Life Club program that included singing,ahealth and anatomy lesson and spiritual teaching. Before the run all the children were givenasnack and drink. The children were divided by age into two groups, pre-school and primary school. Most of the high-school–aged students here go to boarding school inanearby city and were not present. The FBR teams laid out two courses, one around 400 meters and one three kilometers. We explained the history of the race and how people from all over the world run to support freedom in Burma. The older children lined the road to cheer on the younger children for the first event, then traded places with them and ran their own race. Afterward, we trooped them back into the shade of the church and handed out prizes to the first ten finishers. The Run for Relief started in 2004 in Gig Harbor, WA, in the U.S., in response to thousands of Karen villagers fleeing attacks of the Burma Army. Since that time, the races have grown and spread all over the world as the crisis of IDPs has continued in Burma. The first race in Burma was held in Karen State in 2008 when children from Tha Dah Der Village raced around their rice fields. On this day we raced with IDP children whose lives as IDPs are new – attacks in this area are only one year old following the breaking ofa17-year cease-fire agreement with the Burma Army. They are new to this life and the camps have sprung up quickly; households are packed together almost on top of each other and whole families are givena3 meter by3meter space to live in. But in this race, on this day, despite their current situation, the smiles and enthusiasm of the children were strong as they pounded over the rocky dirt road, often barefoot, to celebrate some momentum for fun and freedom and the push of hope forabetter future. Thank you for your part in this and God bless you, The Free Burma Rangers FBR teams on reconnaissance of Burma Army camps The Free Burma Rangers (FBR) mission is to provide hope, help and love to internally displaced people inside Burma, regardless of ethnicity or religion. Usinganetwork of indigenous field teams, FBR reports on human rights abuses, casualties and the humanitarian needs of people who are under the oppression of the Burma Army. FBR provides medical, spiritual and educational resources for IDP communities as they struggle to survive Burmese military attacks. For more information, please visit www.freeburmarangers.org
Jet hte njet
at 7/29/2012 09:30:00 AM
Myitrum manang ni, “Jet Hte N Jet” Ga shagawp shagun dat ai yaw. Kyu hpyi dum na lam. (1) Nawngtau Miwa hkran, IDP ni jam-jau nga ai. Miwa ni shani shana gawt shatsang ai. (2) Sammung maga, Manhai, Mandin de IDP ni grai jat wa, Tai ni shani shana jat kapun wa. (3) Dap Ba (5) ginra de na IDP ni machyi makaw, kanhkye hkye ai law, tsi mawan n law rai nga ai. ¬ Miwa hkran na IDP ni hpe Miwa jarit sin hpyenla ni sa gawt shagu, Miwaga na WP la ni sa ga law maga ya ya rai nna she, lani hte lani nga shalai lu nga ma ai lam chye lu ai. JIC
UHKA KANU SHE TAI MAYU AI UTAWNG KANU NI
at 7/26/2012 09:51:00 AM
Mau sa! Mau sa! Jinghku jingyu ru sai baw pa n taw, mayu dama kahpu kanau
lamun latsa law ai hpawmi hpawmang du salang jan ni wa she, tinang amyu nyet,
jasam maigan waahkalem ga hta shamyet nna awu asin yuk jahtuk, shu mashi shu
masha labau n tsawm mat na, ju majat prat shanat yawngetsun shatan jahpoi asawng
hkrum na lam maw mawn nga ai shiga na lu ai majaw, n chye tsun hkra yawn kaba
hte yawn mat saga ai oi!
Nanhte buga daju mare kaba sin let, kring mading rai nga na ni, yawngakanu
kasi rai, kamoi kasi tai na ni, hpa rai wa me Myen wa dangchyangamaw lanyet hta
kadawng bang myit ta? Moi na jiwa ni tsun ai "Wan kanu hpunjum, nta kanu
dawhpum, masha kanu anum" she nga ai re. Ya daini gaw Myitkyinaenga ai anhte
Jinghpaw Wunpawngakanu ni wa, Jinghpaw kanu n chye tai, gwi kanu gale mat sai
nga sayang gaw, n yawn ai kadai wa nga na!
Chyum mungga hta Eshta (Esther) ngu ai Yuda amyu num kasha langaialam
mu hti yu na ga ai. Yuda amyu ni mahkra hpe mungkan ntsa kaw na ru hte nawng lap
hte brawng sat shamyit kau na matu, hkawhkam Ahasuru aming shabra dat sai kaw na
Eshtaamyit nyan bawnu atsam, magrau grang ai lamamajaw, hkye shalawt la sai n
rai ni? Eshta ngu ai jan lama n nga ai rai yang, Yuda amyu mung mat mat sana. Yuda
amyu mat mat jang, Yesu Hkristu ngu ai mung n paw pru sana! Yesu Hkristu n paw
pru ai rai yang, daini mungkan hta tengman ai makam masham hte htani htana myit
mada shara hpe mung n lu la sana!
Hkawp ni, moi ni e, she myit yu mu. Lapuegunglau hkrum ai Jinghpaw Ewa
nanhte tai na myit ni? Htawm hpang de nga pra matut na nanhteakashu kasha aru
arat ni hpe, dagam dala dingnye hkringhtawng jaw kau da na myit ni? Shinggyim
masha gaw hkum hkrang naw hkrung nga ninglen, n hpru n mai ai amu galaw na rai
yang, hkum hkrang si mat tim, labau tsawm ai mying ngam nga lu yang grau kaja ai n
rai ni? Jinghpaw Wunpawng sha ni, tinang amyu, tinang mungdan dip da hkrum ai
kaw na lawt lu na matu, asak du baw law law, salu salat sai tum sai pa law law hkrat
nna shaning galu apnawng shakut shaja nga ga ai hpe myi di tawn nna nyet kau sana
Hkamai Tang ngu ai gaw, Hkamung Shagawng hpe garet, Ndabat mung hpe
woi shazet ai, Jinghpaw du magam, labau hkanhpa nyam ai ni rai ma ai. Hkyet Hting
Nan ngu ai mung, Mali Hkrang Walawng ga na, htunghking labau gindai jum, ginru
ginsa labau lum ai ni rai ma ai. Lajawn ni ngu ai mung, Hugawng magam du kaba,
mungdan shakung chywi laisa ni rai ma ai. Yawngejawm hkungga nga ga ai re.
Yawngeshareng shagrau da ga ai re. Raitim ya daini gaw, "La chyau chyau sha,
num chyau chyau hka" nga ai hpa, ningrum ningtau (Ewa) niamajaw, wa pu shup
yang, pali nchyan mayut let wa hkyi sha lu manam ai poilaw shabrang hte bung mat
nga manit hka! Goi sha.....! Tsawm la ai Utawng kanu ni wa, Uhka kanu she tai mayu
nga myit hka i?
at 7/26/2012 09:50:00 AM
Myitrum manang ni, daini mung LZ ting Wanjak byeng lajang ra mat ai majaw, 8:00 pm hta she wan bai lu ai re. Daini na matu, “Taukawk Hkawhkam” ngu ai M Ga shagawp shagun dat ai yaw. LZ hkam kaja nga ai. DVB hta, LZ hkrat mat sai shiga lawm pru wa ai lachyum gaw, lawu M ga na kanu ni, madu jan ni, maduwa hte kasha ni galoi wa na ta? Kanang rai ma sata? Ngu, nau san wa ai majaw, mahtai n chye jaw mat nna, “ LZ hkrat sum sai” ngu, myit shapyaw dat ya ai shiga she re da oi. LZ galoi mung, hpyenalata de du na n re kam sham nga ga yaw, Kyu hpyi shaja ra ai lu! N lagawn ga i.
လမ်းလျှောက်ရင် - ကိုယ့်ဘက်ယက်၊
အရေးကြုံရင် - လုံးချလျက်။
ခြေ လက် ခေါင်းများ - ငုံ့လျိုးသွား၊
ခွံမာ သဘော - ခေါင်းမာ သလော?
ပြည်သူ မနှစ်သက်၊ မထောက်ခံဘလျက်၊
အတင်းတက်လာ - မင်းလုပ်တယ်ဗျား___။
ဘယ်သူပြောပြော - ငါ့သဘော။
သူဘဲ စစ်တိုက် - တက်လာ လတ်သော်၊
အခြေခံ ဥပဒေ၊ စိတ်ကြိုက်ရေးတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွက် - အခွင့်ရေး မထွက။
ပြည်မတဲ့ - ဗမာပြေ၊
လမ်းလျှောက်ရင် - ယက်ကန် ယက်ကန်၊
လိပ်ဘုရင်ရ့ - စိတ်ကူး ဥာဏ်။
ဒို့တော်လှန်ရေး - အလျှော့မပေး___။
လူ့ခင့်အရေး - အရယူမလေး ____။
Hkyen lajang ai lam
at 7/26/2012 09:35:00 AM
Myit rum manang ni,
“Hkyen Lajang Ai Lam” ngu ai laika ngau shagun dat ai yaw. Daini Tai wa gaw anhte hpe shi ra ai hku kade lang Maw Lanyet shachyai yu tim n mai byin ai majaw, gasat shakre kau sana de she madung dat ra sai ngu, mahtai shapraw la nna nut nga masai. Israela ni myit n su hkraw ai majaw,KK (40) ning dam ari jaw ai hta, daini anhte (50) ning jan mat hkra dam ari katut sha ai gaw, Israela ni hta grau myit n su hkraw ai majaw rai na re ngu, hkam la ai. Teng man ai simsa lam hpe lu la na matu kyu hpyi shaja nga ga ai hte maren, Wpsha ni yawng KK ra sharawng ai hku asak hkrung hkawm sa na she kyu grau hpyi shaja ra sai nhten ngu,
Wunpawngsha niantsa, Karai kasangatau hkrau hkyen
lajang da ai lam ni hpe tsun mayu ai. Karai Kasang gaw, “ Nanhte
mahtang Ngai hpe lata la ai n rai, Ngai mahtang nanhte hpe lata la
ai” nga, tsun ai re.
Lai wa sai (17) ning tup, Simsa lam la ai aten nau garawt kau
saga ai; Tai wa hpe anhte aten nau jaw kau saga ai nga nna, anhte
daini myit malai lu kau ga ai. Gajawa mung rai nga ga ai. Tai wa
wanglu wanglang katsi majan hte dam la ai anhtealamuga ni
majoi madu la kau ai. ShanhteaHpyendap ni anhtealamuga ntsa,
Eka sen lam she dam hkra agung ahting shangang shakang galaw
la kau ai. Dai hte maren, Sutmasa lam hta mung, sinat kalang n
shangoi, Hpakant lungseng maw ni, Ja maw ni, Hpunmaw ni madu
sha kau ai.
Shanhte asuya ni gaw lamuga madu mung re ngu ai hku nna,
Malihka kaw na Putao hkyen bum n ngam hkra, kam ai hku shalau
kau ai. Miwa hte matut sha nna anhteaShanglawt Ginra hkan
kam ai hku galaw sha bang wa ai. Anhte Wunpawngsha ni hpe lai
ladat amyu myu hte shagyip shagyeng, jahkrit shama ai.N ngwi n
pyaw n sim n sa nchyi nmu byin hkra dingsa mi ai. Anhte a
Shanglawt hpyendu hpyenma ni hpe kam ai hku sat kau ya ai;
Numma roi rip sat kau ya ai. Manu dan ai anhteakashu kasha
matu mara ni hpe manawn masham myit hte manu n dan mat hkra,
katsi majan hte jahten kau ya ai. AnhteaHpa-awn Ningbaw
Ningla nkau mi hpe myit masin kya mat hkra, mawng kau ya ai.
Ndai zawn, (17) ning lapran sharai la n lu, shabai la n lu ai
sum machyi lam mabyin ni anhte hta masin nsi maroi nni dik hkra,
byin lai mat wa saga ai re.
Raitim, maga mi de yu yu ga. Ndai (17) ning lapran, anhte
hpe SHIaamyu shatai na matu lata la ai Yehowa Karai Kasang
hpabaw galaw nga ai kun? SHI anhteamatu (17) ning tup bungli
law law galaw nga ai hpe mu lu na ga ai.
Myenmung gaw, Hpyen Gumshem asuyaamarang e,
Sutmasa lam, Hpaji lam, Mungmasa lam, Shinggyim ahkaw
ahkang lam ni yawng di hkrat hkrat sum mat wa aiamajaw,
Wunpawng Ramma ni law law hpe Karai Kasang gaw, Mungkan
maigan mungdan shara shagu du hkawm mat wa hkra, Shachyam
shabra dat sai re. Maigan du mat wa ai Wunpawng Ramma ni
mung,tinggyeng myit n rawng, Kanu Mungdan hte tsan gang
magang, myit su magang, Myusha lam-yan hpe myit lawm hkawn
hkrang chye na hkam sha magang rai na matu, Karai Kasang gaw
hkyen lajang da ya ai lam nga sai.
Karai Kasang gaw, Computer Hpaji Munu ni hpe machye
machyang jat bang ya ai majaw, 2004 ning kaw na Internet hte
mungkan ting seng ang ai masha shada aloi sha matut mahkai
hkat lu saga ai re. Anhte Wunpawngsha ni shada mung kade tsan
gang ai mi raitim, masha shada n mu n chye hkat tim, myit masin
shada lamu ganghkau kaw aten n lata ai hkrum zup nna, shada
zinlum hkat lu ai hte, kanu mungdanearau nga yang na hta grau
ngang kang ai pu gang sin machyi tsawra myit kaba ni hpe lu
la ga ai.Dai majaw,daini Mungkan ting de chyam bra nga ai
Wunpawngsha ni yawng, KIO,KIA gaw Amyu ting hpe woi
shalawt na re ngu, kamhpa dik let, 99 % jawm madi shadaw
Karai Kasang gaw, Gumshem asuya hte KIO, KIA majan
kaba byin sana re chye nga chyalu rai nga ai. Wunpawngsha ni
tengsha ru yak tsin-yam hkrum sana hpe mung chye nga wu ai. Dai
majaw, majan garai n byin ai kaw na Mungkan ting chyam bra nga
ai Wunpawngsha ni hte, Miwa, Kalamung na sai rum ni yawng hpe
tau hkrau myit masin zinlum jasu jahprang kahkyin gumdin da ya
sai hte maren, Myenmung ting na Wunpawngsha ni mung, hkam
sha ai lam shawng na hte n bung sai. Moi gaw mare kaba de nga ai
Wunpawngsha ni KIO, KIA ngu pyi hkum tsun. Nam na sharaw
kaba hpe zawn, shing n rai, lawuga na lapu puhtum hpe hkrit ai
hpa she hkrit shajang ma ai.
Lawuga na Myen ni puhtum hpe nau hkrit ai majaw, mying
n tsun ai, Poo (ပိုး) ngu she tsun ma ai.Anhte Jinghpaw ni mung,
bumgaesharaw hpe hkrit dik ga ai majaw, “Sharaw” ngu pyi n
tsun gwi, Maling hkawhkam ngu she tsun ga ai zawn, mare kaba
na Jinghpaw ni mung KIO, KIA hpe mying gang tsun na n-gwi
(Hpyen Asuya hpe hkrit ai majaw) “Wora de na ni” (sh) “Manang
la ni” ngu she, kahte hkra hkra tsun lai wa saga ai. Nawku Hpung e
mung, Sasana magam bungli dabang hkanemung, KIO,KIA hte
kachyi sha pyi n seng ga ai; ngu ai satlawat hte she nga lai wa
Amyu Shayi langai daram, mare kabaemyusha lam-yan hta
loi li shamu shamawt hkrup, tsun shaga hkrup re ai hpe mu jang,
hkye hkrang la ai n hkrum ai; simsa lam hpe jahten sharun hkyen
ai ngu, mu kau yu kau, shatan kau, hkyet-rung kau, ginhka kau
chye lai wa saga ai. Shagri brep mat ai; shing n rai, teng man ai
lam hpe n chye hkam sha mat ai lachyum rai nga ai.
Raitim daini gaw, Karai Kasang hkyen lajang da ya ai hte
maren, anhteamasin salum ni kahkyin gumdin mat nna, n-gun ja
nga sai. Kadai hpe mung n hkrit sai. Roi rip sha ai mung n hkam
sai. Karai KasangeWenyi myi jahpaw ya nna, langai hpe zingri ai
mu yang, langai wa, “ Aka law!” ngu, Mungkan ting na hkra,
marawn jahtau chye saga ai. Tsim-yam hkrum nga ai mungmasha
niamatu, Mungkan de jawm marawn ya ai majaw, USA ni du
hkra, $ wan3garum na nga ndau sai. Sr. Naw Ming mung,
Mungchying Atsam Ningja shagrau sha-a kumhpa kaba hpe hkam
la lu sai.
Myit grai ja ai ngu nna mu mada ai, Z.Ting Ying wa du hkra
pyi, Pangwa jarit Hpundung6na hpyen-yen ni hpe sa du gawan
nhtawm, Pu gang sin machyi wa sam ai; “Nanhte ndai kaw grai yu
matsan dum na zawn rai nga myit dai. Pangwa kata de alum ala
wa shingbyi nga marit. Ra mara mahkra yu lajang ya na” ngu,
zinlum nga ai lam na lu ai. Dai wa she, Tsin-yam masha hpyen-
yen niamyit masin hta, Tai hpyen hte kanawn nna, Taiaga she
madat mat sai; Z. Ting Yingashingnip npu kata de shang yang,
Uraw kata na U hpe zawn, galoi kam sat yang sat sha, kam dut sha
yang dut sha rai na hpe tau myit hkrit ai majaw, “N kwi shang
shingbyi ga ai. Ndai kaw tsin-yam hkrum nna nga ai pyi grau shim
na re” ngu ai lachyum hte ningdang kau ma ai lam na lu
ai.Raitim,Myu Tsaw myit grai kaba ai Z. Ting Ying gaw myit galu
kaba hte, Miwaga Hting Chungenaw ala nga ai lam chye lu ai.
Ndai zawn Karai Kasang gaw, anhte Wunpawngsha ni hpe
jau jau kaw na shada grau tsaw ra sin dun sumri ngang kang mat
hkra hkyen lajang da ya ai lam hpe, sakse loi sha mi garan gachyan
dat ai rai.
; Z. Ting Ying gaw, Miwa Communits Party shang
masha mung rai, Myen BGF shang masha mung rai re ai; anhte a
Wunpawng Myu tsaw masha kaba langai rai nga mali ai. Ya
yang shi gaw, Myen dinglawa hte hpawm nna, Pangwa kaw Ka-ni
Nanghpam jak-rung kaba gaw-gap nhtawm, ningsin bungli kaba
hta dum nga ninglen hka yawng ai hpa, sharai la n lu, hkye
hkrang la lam n mu rai; matsan mayan htani htana tsadanalata hta,
tsin-yam majing hkrum nga ai wa re.
at 7/23/2012 10:58:00 AM
လာမည့်အပတ်ကျရင် မြစ်ကြီးနားမှာ ကြံ့ဖွပ်ဇနီး ကချင်အမျိုးသမီးများ
ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာတစ်စု ကိုယ်ဟန်ပြ စီတန်းလှည့်လည်ဖို့
သတင်းစကား ကြိုတင်ကြားထား ရလို့ အံသြမိပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ`ပိုးသာကုန်၊ မောင်ပုန်စောင်းမတတ်` ဆိုတာမျိုး
မဖြစ်စေချင်လို့ တစ်နေ့တာ ဖျော်ဖြေရေးမို့ ဈေးကြီးကြီး အလှပြင်စရာတော့
မလိုဘူးထင်ပါရဲ့။ ကချင်အမျိုးသမီးကြီးများရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဝါသနာ၊
အကြင်နာ၊ ကရုဏာ အစရှိတဲ့ နာကြီးငါးပါးကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုချင်ပေမယ့်
ဆင်ခြင်စရာလေးတစ်ခု မှတ်ကျောက်တင်ဖို့ ထပ်လောင်း ဝေငှချင်ပါသေးတယ်။
ဒေါ်လေးတို့ လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ အရာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့
(၁၇) နှစ်လုံးလုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ အရသာထူး အခြေအနေမျိုးကို ဆိုလိုသလားမသိ။
ထောက်ပြလိုသည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇)နှစ်တာကာလဟာ
အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းထားတာကလွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ဆီသို့
အရှိန်ပြင်းပြင်း ခရီးဝေးနှင်ခဲ့ကြတာ သတိထားမိစေလိုပါတယ်။
အဆိုပါခရီးဝေးမှ မူလနေရာ ပြန်ရောက်ဖို့ရယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ရဖို့ရယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲဖို့ရယ်၊ တိုးတက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး
ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရယ် အစရှိတဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ တကယ့်တကယ်
အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကို မပျက်ပျက်အောင်ဖျက်ပြီး မပျောက်ပျောက်အောင်
ဖျောက်နေသူတွေဟာ KIO/KIA တွေမဟုတ်ကြဘဲ ကြံ့ခိုင်ရေးအမည်ခံ လက်ရှိအကြံအဖန်
ရာဇဝတ်သားလက်ကျန် တွေသာဖြစ်ကြောင်း အထူးလေ့လာဆန်းစစ် စေလိုပါတယ်။
ဒေါ်လေးတို့ရယ် - ကချင်အမျိုးသမီးများရဲ့ အနာဂတ်သမိုင်း
စန်းပွင့်လှပသင်းပျံ့ မွှေးကြိုင် လိုပါက စစ်မှန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို
ယခုဖြစ်ပုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီးမောင်းထိုးပြစတမ်းဆိုရင်
ဗိုက်နာနေသူ တစ်စုံ တစ်ဦးက လူကြားသူကြားမှာ တိတ်တိတ်ကလေး
လေပုပ်မြူးလိုက်တဲ့ဟာကို ဦးဏှောက် မရှိတဲ့ ခွေးတစ်စုက
မစင်တုံးများတွေ့လိုတွေ့ငြား အမြီးတလှုပ်လှုပ်နဲ့ အလုအယက်အနံ့ခံ
စွန့်စားရှာဖွေနေကြသလို ဒေါ်လေးတို့ခမျာ မကြာမီစီတန်းလှည့်လည်မယ့်
အစီအစဉ်ဟာလည်းပဲ ကြံ့ခိုင်ရေးဦးကြီးတွေ ဗိုက်နာလို့
လေပုပ်မြူးလိုက်တဲ့ဟာကို `အု အု အု အု - သူ့စကားလူမသိ၊ လူ့စကားသူမသိ၊
သနားပါဘိ` ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုး မရောက်စေလိုကြောင်း စေတနာမွန်ဖြင့်
ကချင်တွေ ဘာလို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်လဲ
at 7/23/2012 10:50:00 AM
အခုတလော KIA ငြိမ်းချမ်းရေး Issue က တော်တော် Hot နေတာ သတိထားမိတယ်။ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၉ ရက် ဆိုရင် ဗမာစစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင်တာကို KIA ခုခံနေတာ တနှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။
အချို့က KIA ကို “လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကို လက်ခံလိုက်ပါ၊ ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ပါလား” လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေး နည်းနည်း ပြန်နွှေးလိုက်တာပေါ့။
KIO ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တောက်လျှောက် ညီလာခံတက်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်မယ့် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ် အချက် ၁၉ ချက် ကိုလည်း တင်ပြခဲ့တယ် (KIO 19 Points Proposal: http://www.ibiblio.org/obl/docs4/KIO_proposal.pdf) ။ သို့သော် မှတ်တမ်းတင်ထားပေးမယ် ဆိုတာနဲ့ပဲ ဖယ်ထားခံခဲ့ရတဲ့အပြင် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးက “တောင်ပေါ်ကို ပြန်ကန်ထုတ်ခံရမယ်” လို့တောင် ခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ် ဆိုပဲ (Burma at Crossroads: http://www.encburma.net/index.php/polocy-papers/37-policypapers/108-lian-h-sakhong-burma-at-crossroads.pdf) ။ KIO ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့တိုင်း ကြုံရင် ကြုံသလို တမျိုး၊ တရားဝင်နည်းလမ်းက တဖုံ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကချင်လူမျိုးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း ပြောတိုင်း ကျနော်တို့က စစ်သား၊ နောင်တက်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးစကား ပြောကြပါ လို့ပဲ စကားလွှဲတတ်ကျတယ်တဲ့လေ။ ဒီတော့ ယောက်ျားစကားပဲ၊ တက်လာမယ့် အစိုးရလွှတ်တော်မှာ ပါဝင်နိုင်ရေး ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ KSPP (Kachin State Progressive Party:http://www.mizzima.com/political-pro/new-parties/kspp.html) မှာ KIO ခေါင်းဆောင်တချို့ မိခင်အဖွဲ့အစည်းက တရားဝင် နုတ်ထွက်ပြီး ပါတီဝင်တယ်။ အဲဒီပါတီက မှတ်ပုံတင်ကျမလာ (http://burmapartnership.org/2010elections/2010/09/ec-rejects-individual-kachin-candidates/) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဖွဲ့ရင်တော့ တခုခုတော့ ထူးခြားမှာပဲဆိုပြီး တက်လာတဲ့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့ KIO စောင့်နေရင်းနဲ့ပဲ အခုလို ထိုးစစ်ဆင်တာ ခံလိုက်ရတာပါပဲ။
“သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ ခြိမ်းခြောက်တာ ကြောက်မယ်ဆိုရင် ကချင်လူမျိုးတွေ အစကတည်းက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မစခဲ့ဘူး။ ခြိမ်းခြောက်တာ ခံပြင်းလွန်းလို့ကို လက်နက်ကိုင်လာတာပဲ။ လက်နက်ကိုင်လို့ ကချင်ရွာ မီးရှို့တယ် မပြောနဲ့၊ ကချင်တွေ ဘာမှ လက်နက်မကိုင်ခင် ကတည်းက မုဒိမ်းကျင့်၊ စော်ကားမော်ကား ဆက်ဆံ၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဆောက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဆောက်မိန့်ကျတယ် မရှိဘူး။ တချို့နေရာဆို ဘုရားကျောင်းလို့ နာမည်မတပ်ရလို့တောင် လာခြိမ်းခြောက်သေး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီများကျတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဆိုသူများကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားပုံစံ ပြုလုပ်ပေးတယ်။”
ထိုးစစ်ဆင်တာကို တာလီမြစ်ရေအားလျှပ်စစ်ကြောင့်ရယ်လို့ အများက ထင်ကြတယ်။ စစ်အစိုးရက အရင်ကတည်းက KIA ကို အမြစ်ပြတ်ချေမုန်းဖို့ပဲ။ ဒီတော့ KIA ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် (Boarder Guard Force) ပြောင်းဖို့ အတင်းအဓမ္မ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ တွန်းပို့တယ် (The Kachins' Dilemma: http://euro-burma.eu/doc/EBO_Analysis_Paper_No_2_2010_-_The_Kachin%27s_Dilemma.pdf) ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၁ ထိ ခဏဏ ကြားခဲ့ရတဲ့ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ရာဇသံ (BGF Deadline) ကို နိုင်ငံရေးလေ့လာတဲ့ လူအားလုံး ကြားမိပါလိမ့်မယ်။ ဟိုးအရင့်အရင် ကတည်းကလည်း ကြားလည်းမကြားဘူး၊ ကြိုလည်းပြောမထားတဲ့ BGF အစီအစဉ်က (ဘဘကြီးရဲ့ စေတနာ ဆိုပြီး လာပေးတဲ့ BGF အစီအစဉ်) KIO ခေါင်းဆောင်များလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ စစ်လည်း ပြန်မတိုက်ချင်။ သူတို့ စိတ်ကူးထားတာတော့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း အခြေခံဥပဒေပြင်ပြီး စိတ်ချရတဲ့အချိန် လက်နက်အားလုံး အပ်လိုက်မယ်။ အခုတော့ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ BGF လုပ်ပါဆိုတော့ ကချင်နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေး ချက်ချင်း ကျင်းပရတယ်။ BGF လက်ခံမလားဆိုတော့ ကချင်ပြည်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေက ခါးခါးသီးသီး ငြင်းကြပါလေရော (Kachins vow to resist Junta pressure: http://kachinpost.com/news2009/Sept06.html), (http://asiancorrespondent.com/60135/burma-kachin-people-reject-ceasefire-without-political-talks/) ။ မင်းတို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မြို့ပေါ်မှာ တိုက်တာအဆောက်အအုံနဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ ဇိမ်ရှိရှိ နေနေတာကို နှမြောရင် နုတ်ထွက်ကြ၊ လူငယ်တွေ ဆက်လုပ်မယ်လို့ ၀ိုင်းပြောတော့ KIA ခေါင်းဆောင်များက မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရလေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် သူတို့ပဲ ဆက်ထိန်းမယ်ပေါ့။ အတတ်နိုင်ဆုံး စစ်ပွဲရှောင်ချင်တဲ့သဘော ...။
သို့သော် ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းခွင် ခဏ၀င်ကြည့်မယ် အကြောင်းပြပြီး ခွင့်တောင်းဝင်တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်မထွက်တော့ဘူး။ အဲဒီအကွက်ကို KIA ဗိုလ်ချုပ်ဂမ်ရှောင်က ကလေးအကွက်လို့ နာမည်တပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ အဲ့ထဲကနေကို ကွပ်ကဲပြီးတော့ KIA ကို စတိုက်တော့တာပဲ။ နောက်တော့ သူလည်း တင်ပါးနဲ့ ခြေဖနောင့် တသားတည်း ပြေးပါလေရော။ ပြီးတော့ KIA ဆက်ဆံရေးရုံးဝန်ထမ်းကို ဖမ်း၊ စစ်သုံ့ပန်းလဲလှယ်မယ်ဆိုတော့ ရစရာမရှိအောင် နှိပ်စက်ပြီး အသေကောင်ပြန်ပေး ... သူတို့ရဲ့ သုံ့ပန်းကျတော့ မှဲ့တစက်မစွန်း ပြန်ပေးတယ် (သတင်းဖတ်ရန် http://www.mizzima.com/special/kachin-battle-report/5406-burmese-government-not-following-international-policy-on-captives.html) ။ ပြီးတော့ အနီးအနားရှိတဲ့ ရွာတွေကို ဒုက္ခ စ ပေးတော့တာပဲ။ အခုလိုင်ဇာမှာ ခိုလုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည် အများပိုင်း အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်ဘက်က ပြေးလာတဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ (Crimes in Northern Burma: http://partnersworld.org/usa/images/stories/crimes_in_northern_burma/crimes_in_northern_burma.pdf) (Burma: Committing Abuses in Kachin State:http://www.law.yale.edu/Burma.Army_Committing_Abuses_in_Kachin_State.pdf) (Burma: Untold Miseries: http://www.hrw.org/features/burma-untold-miseries).
ဒီတော့ ဘယ်မလဲ လွှတ်တော်ထဲ KIO ၀င်မဲ့လမ်း။ KIO မပြောနဲ့ KSPP ဆိုတာ ကချင်လူမျိုးများပါတီပဲ၊ KIO ထွက် တယောက် နှစ်ယောက် ပါတာကလွဲလို့ အားလုံး မြို့ပေါ်က ရပ်မိရပ်ဖ ကချင်၊ ရှမ်း နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ပါတီကို ဘာလို့ ပါတီမှတ်ပုံတင် မပေးလဲ။
တချို့က KIA ဘာ တောင်းဆိုနေမှန်း မသိဘူးလို့လည်း ဆိုလေရဲ့။ KIA တောင်းဆိုနေတာ မသိသေးဘူးဆိုရင် ပြောပြမယ်။ KIA ဆိုတာ KIO ရဲ့ စစ်တပ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ KIO မှာ ကချင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ပြည်သူ့ရဲ၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ လူငယ်၊ အားလုံးစုံတယ် ... ကချင်အစိုးရပဲ။ ဒီတော့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ ဒီလောက် ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတဲ့ ကချင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့က အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းနေတာ တရားသလား၊ မတရားဘူးလား ဆိုတာ တခုတည်း ပြောကြည့်ပါ။ ဒါတောင် သီးသန့်နိုင်ငံ ခွဲထွက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပဲ တောင်းတာ။ မြန်မာ့အလင်း (ကချင်အတွက်အမှောင်) ပဲ ဖတ်ရင်တော့ KIA ဘာတောင်းဆိုခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘယ်သိမလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်တုန်းက အပစ်အခတ် ရပ် လက်မှတ်ထိုးထားတာ KIA က တခါမှ ချိုးဖောက်ခဲ့တာ မရှိဘူး။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ KIA စစ်သားတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးကာလမှာ လက်နက်မဲ့ အသားလွတ် ဥပဒေမဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တာ နှစ်ခါတောင် သည်းခံခဲ့သေးတယ်။ အခုလည်း စပြီး ထိုးစစ်ဆင်တာ KIA မဟုတ် ဗမာစစ်တပ်က ဖြစ်တယ်။ အခုထိ စစ်ကြောင်းမထိုးရင် သို့မဟုတ် ထိုးစစ်မဆင်ရင် ငြိမ်းချမ်းနေပြီးသား၊ အပစ်ရပ်နေပြီးသားပဲ။ KIA က ကျူးကျော်စစ် တခါမှလည်း မဆင်နွှဲသေးဘူး။ ဒီတော့ ဘာအတွက် အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထပ်ထိုးစရာရှိလဲ။ လက်မှတ်ထိုးထားလည်း စစ်တပ်က နောက်ကြောကို ဓားနဲ့ ၀င်ထိုးနေတာ ဒီတိုင်း ခံလိုက်ရမှာလား။ အခုလည်း မသေမချာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဆိုတဲ့လူတွေက တဘက်မှာ တမျိုးပြော၊ အစိုးရသတင်းစာမှာ တမျိုးရေး၊ စစ်တပ်က တမျိုးလုပ်၊ ဘာကို ယုံရမှန်းမသိ (ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင် ပြောစကား : http://www.youtube.com/watch?v=xuVi1gLnUJ8&feature=related) စဉ်းစားပေါ့။ ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ဆိုတိုင်း လူဆိုးစာရင်းထဲ အတင်းအဓမ္မ တွန်းထည့်နေရုံလောက်ပဲ ကြိုးစားနေသမျှ ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
KIA ဆိုတာ မသိနားမလည်တဲ့ လူမိုက်အုပ်စုက ဦးဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ KIO ကို စတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်တယ်။
KIA ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဆရာကြီး ဦးဘရန်ဆိုင်းဆိုတာ မြစ်ကြီးနားက နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အထက်တန်းကျာင်း (နောက်ပိုင်း ဆရာ အတတ်သင်ကျောင်း ဖြစ်သွားတဲ့ ကျောင်း) ကျောင်းအုပ်ပဲ။ မြစ်ကြီးနားက အထက ကျောင်းတွေမှာ ဆရာ၊ ဆရာမ ကြီးတွေလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများ သူ့တပည့်ဟောင်းတွေ ဖြစ်တယ်။ အခုလက်ရှိ KIO ဥက္ကဌ ဦးဇောင်းဟခ်ရာလည်း ပါတီစုံခေတ် ဆွမ်ပရာဘွမ် ခရိုင်တောင်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဂမ်ရှောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် တို့ဆိုတာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီး KIA ထဲ ကိုယ့် သဘောနဲ့ကိုယ် ၀င်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အခုလက်ရှိ KIA ဗိုလ်လောင်းကျောင်းဆင်းအားလုံး ဘွဲ့ရများဖြစ်တယ်။ တချို့ဆို နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် ဘွဲ့ရထားတာ English လို ကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်တယ်၊ ပြောတတ်တယ်။
ဒီတော့ KIA ဘာလိုချင်လဲ။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ တရားမျှတမှုမှာ အခြေခံတယ်။ တရားမျှတမှုဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မှာ အခြေခံတယ်။ ဒါဟာ ဖယ်ဒရယ် (Federal) ဖြစ်တယ်။ ဖယ်ဒရယ်ကို မသိကျိုးကျွံပြုထားတဲ့ ကာလပတ်လုံး မြန်မာပြည် ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းဘူး။ ဖယ်ဒရယ်ဟာ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဘူး။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ် လျှော့ချရေး (Decentralization) သာဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူ ဖြစ်တယ်။ သူ့မြို့၊ သူ့ရွာ၊ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရေးသာဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်လည်း ဖယ်ဒရယ်ဖြစ်တယ်။ ဥရောပနိုင်ငံအားလုံး ထိုင်းနိုင်ငံအဆုံး ဖယ်ဒရယ်ဖြစ်တယ်။ မကောင်းတာ ဘာမှမရှိဘူး။
သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ ခြိမ်းခြောက်တာ ကြောက်မယ်ဆိုရင် ကချင်လူမျိုးတွေ အစကတည်းက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မစခဲ့ဘူး။ ခြိမ်းခြောက်တာ ခံပြင်းလွန်းလို့ကို လက်နက်ကိုင်လာတာပဲ။ လက်နက်ကိုင်လို့ ကချင်ရွာ မီးရှို့တယ် မပြောနဲ့၊ ကချင်တွေ ဘာမှ လက်နက်မကိုင်ခင် ကတည်းက မုဒိမ်းကျင့်၊ စော်ကားမော်ကား ဆက်ဆံ၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဆောက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဆောက်မိန့်ကျတယ် မရှိဘူး။ တချို့နေရာဆို ဘုရားကျောင်းလို့ နာမည်မတပ်ရလို့တောင် လာခြိမ်းခြောက်သေး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီများကျတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဆိုသူများကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားပုံစံ ပြုလုပ်ပေးတယ်။
ကချင်ခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းတွေ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းတယ်။ လက်ရှိ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ နာမည်ကြီး အထက်တန်းကျောင်းအားလုံး ခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ ပညာရေးကောလိပ်အစ၊ ကွန်ပြူတာကောလိပ်အဆုံး ခရစ်ယာန်တွေဆီက သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်။ ကချင်စာလည်း သင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ တကယ်တော့ အခုထိ ဗမာအစိုးရလက်ထက် ဆောက်ပေးတာ ဘာမှမရှိဘူး။ လက်ရှိ ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းဇော်ကိုယ်တိုင် ခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းမှာ ပညာသင်ပြီး လူဖြစ်လာတာပါ။ မယုံရင် သူ့မေးကြည့်ပါ။ သူ့ဆရာမတွေတောင် အခုထိ ရှိသေးတယ်။
ယဉ်ကျေးမှု စော်ကားခံရ၊ ကချင်တွေမှာ Family name (Htinggaw Mying) ရှိတာကို မကြားဖူးဘူး၊ ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင်မှာ မထည့်ပေးဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက်မှ Family name က အရေးကြီးမှန်း သိလာရ။ ကချင်ပြည်နယ်က တခုတည်းသော မနောပွဲ တနှစ်နေမှ တခါပဲ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ လုပ်ခွင့်အတွက် နှစ်တိုင်း အဆင့်ဆင့် စာတင်ရတယ်။ ပွဲရက်မှာ အစိုးရရုံး၊ ကျောင်းမပိတ်ပေးဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာလည်း ဗန်းမော်က မနောကွင်း အဖျက်ခံရတယ် (သတင်းဖတ်ရန် : http://bnionline.net/index.php/news/kng/7411-burmese-military-authorities-hamper-preparations-for-kachin-festival.html) ။ မြန်မာစကား မတတ်လို့ ဆိုပြီး အဆဲခံရ၊ အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ကချင်၊ခရစ်ယာန်ဆိုရင် ဘေးဖယ်၊ လက်မခံ၊ ကချင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးထားတဲ့ အမတ်က ၀န်ကြီးဖြစ်မလာဘဲ ဦးနုက ကောက်တော်မူတဲ့ တယောက် ၀န်ကြီးတက်ဖြစ် (ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဟောင်း ဒူဝါဇန်ထဆင်ရဲ့ “ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းပြန်” ဖတ်ရန်https://docs.google.com/open?id=1poXW3tZMe6CTJ6uV35xCn0VAFUiyduKI8Bn3Xhl1tQM_70E7UXt1Hj8hIVxO) ။ ကချင်တွေပိုင်တဲ့နယ် ဖီမော်၊ ကော်လန် ကန်ဖန် ဒေသကို ဦးနုက ကချင်လူမျိုးတွေ ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက တရုတ်ကို ပေးလိုက်တယ်။ မကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဦးနုကို တွေ့ပြီးပြောတော့ “ငါ--ိုးမသား ခွေးကောင်တွေ အားလုံး ဖမ်းချုပ်လိုက်မယ်” ဆိုပြီး မဖွယ်မရာ ဆက်ဆံတယ် (သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ပြောစကား)။ ခရစ်ယာန်ဆိုရင် ရာထူးမတက် (တက္ကသိုလ် အတူတက်တုန်းက ပူတာအိုမှာ ရထားရုံပိုင် အလိုရှိတယ်လို့ ပြောင်နှောက်တာကို ယုံတဲ့ ဗမာ ငတုံးကျတော့ မြို့နယ်မှုးတွေ တက်ဖြစ်) ... အမျိုးမျိုးသော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို မခံနိုင်လို့ကို လက်နက်ကိုင်လာတာ ...။
ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတော်လူကောင်းများ ဒီအရာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်၊ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ဘာကြောင့် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ အရင်လေ့လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစကား စပြောရင် ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
(Kachin Duwa ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ...)
interview with Gen.S gun maw VCS
at 7/22/2012 10:24:00 AM
Interview With Brig. Gen. Gum Maw (VCS-KIA) by Myanmartimes
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် မြန်မာအစိုးရမှ ကြံစီဖန်တီး၍ မြစ်ကြိးနားမြို့မှ အမျိုးသမီးများကို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခိုင်းခြင
at 7/22/2012 10:18:00 AM
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် မြန်မာအစိုးရမှ ကြံစီဖန်တီး၍ မြစ်ကြိးနားမြို့မှ အမျိုးသမီးများကို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခိုင်းခြင်း
at 7/20/2012 08:27:00 AM
http://myitkyina.blog.com/files/2012/07/1.jpg Read more click on link
at 7/20/2012 08:06:00 AM
Myitrum manang ni, “ဘယ်ရပ်ဌာနီ အဆက် - ၄” shagun dat ai yaw. Nepyidaw kaw, LZ map madun tawn nna, shaman shakyang nga ma ai nga ai; shiga chyalam mung tsun shajang nga ma ai. Z.Ting Yingaka-ni nanghpam shabra ai H.Q gaw, MKA, Kawahka mare kaw re nga nna mung, hkam daga tsun nga ma ai. JIC
at 7/19/2012 09:33:00 AM
Myitrum manang ni, ဘယ်ရပ် ဌာနီ (အဆက် - ၃) shagun dat ai yaw.17.7.2012 ya shani, Bumsawnbum kaw gasat hkat yang, anhteaShare Ninghkring2Share Shagan tai mat wa sai lam na lu ai . JIC
at 7/19/2012 09:32:00 AM
Myitrum manang ni, “ဘယ်ရပ်ဌာနီ (အဆက် - ၂)” shagun dat ai . Ya hte gaw, majan shiga makau grup-yin kaw zim nga ai.Tsan ai shara de anhte n na ai majan kade byin ai kun? M gaw Kachin ni hpyen lu rim tim n sat ai; bau da ma ai; dai majaw,gasat poi hta law law rim hkam nna,LZ kaw law law shang lu hkra di da na re ngu ma ai da. JIC
at 7/17/2012 09:48:00 AM
Myitrum manang ni, “ဘယ်ရပ်ဌာနီအဆက်-၁” shagun dat ai yaw. Ya M ni gaw,Kachin hpe shamyit kau na chyu sha hpaji daw nga ma ai re majaw, MKA kaw Gumsan waaMungmasa Hpaji Ninghkring wa hpe dat dat nna, WP ni hpe hkrai Mungmasa Wunkat bat mi tup wa jaw sai rai yang, WP ni tsawmra byawng bang mat sai lam chye lu ai. Awmdawm gasat di la na ngu ai hte Simsa lam she la sana ngu ai hpung (2) brang di kau ya ai hku rai sai. Dai kaw KIO hpa majaw, Muse, Manmaw hkan M hte n kam hkrum shaga ai i? Nga nna n chye na ai KBC Rev: kaba ni mung lawm nga ma ai. Mauhpa wa she n re ni? JIC Read more+++
at 7/16/2012 09:27:00 AM
Myitrum manang ni, "ဘယ်ရပ်ဌာနီ" ngu ai laika shagun dat ai yaw. Mani na laban gaw, Majan tsin-yamamajaw, KK kaw dingnyawm sit shang nna,matut n di akyu hpyi ai laning mi jan sai re. Chyeju shakawn kyu hpyi hpawng kaba galaw ga ai. Matut nna n sim n sa akyu hpyi nga na matut n-gun mung bai awai la ga ai. Amyusha nialam woi wa Madu Yesu hpe kam sham let, matut n di akyu hpyi nga na ga ai. WPsha ni yawng maren rai na re kam ai........yaw.
Microsoft Word - Be Yat Hta Ne
SAGU REM KAJA NGU AI KANING RE AI NI HPE NGA MA TA?
at 7/16/2012 09:23:00 AM
Lai sai ji nat jaw ai ten prat na labau hpe nhtang yu yang, Jinghpaw
Wunpawng sha ni hkarang yi galaw sha let, u, wa, yamnga rem sha ai hta
lai nna, sagu rem sha ai mi n mu lu ai. Ya daini na Hkristan prat hta
rai tim, Jinghpaw ni sagu rem sha ai n mu ai. Langai lahkawng nga yang
nga dam nhten! Rai ti mung, “SAGU” ngu ai ga hkum hpe chyawm gaw, Myen
ga, Sam ga, Miwa ga ni langai ngai kaw na tsun shakap la ai n re sha,
Jinghpaw Wunpawng sha niadumsa jaiwa ga dingsa hta nan rawng nga ai
kaw na lu la ai re hpe chye lu ai. Dai lam gaw, Jinghpaw Wunpawng sha
ni moi chyaloi prat hta, “SAGU” ngu ai dusat myu hte kanawn lai wa yu
sai sakse langai rai nga ai.
Ya daini Hkristan prat hta chyawm gaw, Chyum Laika hta rawng nga sai
hte maren, “SAGU” ngu ai hpe sumnung shingdi ai, sanseng dingman ai,
si mani temsi re ai; madat mara hkungga la ra chye ai hku lachyum htai
shapraw la nhtawm, “BAINAM” ngu ai hpe mahtang gaw, myit ja ai, myit
shadang ai, lale jehpre ai, myu n jet ai, sawt ai maga hku lachyum
htai la nga ga ai. Dai sha n-ga, “CHYAHKYAWN” ngu ai nam gwi hpan hpe
mung, n hkru n shawp, manawn masham, n ju n dawng, kashun kashe, adip
arip, zingri zingrat, ashep amya chye ai baw Satan dusat hku lachyum
htai la nga ga ai re.
Bai nna Nawku Hpung Sara ni, Makam Masham Sara ni hpe mung Sagu Rem
ni ngu ai hku sawn la htai la nga saga ai. Yesu gaw, Sagu Rem Wa Kaja
re, ngu ai hpe la kap la ai lam rai nga ai. Sagu rem kaja ngu ai gaw,
tinangasagu ni hpe yu lanu lahku makawp maga ai. Ju sumwumedau nga
ai kun?. Lunghkrung ntsa mara mat ai kun? Chyahkyawn niejawm nga ai
kun? Lagu lagut nielagu la nga ai kun? Sagu latsa kaw na langai mi
sha mat tim, mat ai sagu hpe n mu mu hkra hkan tam ai. Mat mat ai
langai hpe bai mu tam la yang, nga taw chyalu jahku shi jahku hta grau
kabu chye ai. Mat mat ai langai mi hpe mu tam na matu, tinangan-gun
atsam, baw nu myit nyan, hkum hkrang asak mahkra apnawng nna shakut
shaja ai hpe she SAGU REM KAJA nga nna lachyum shaleng lu nga ai.
Jinghpaw Wunpawng sha niabuga mungdan hta ya ten majan kaba byin
hkrum nga ga ai. Sagu ni garen gari hkrum nga ai. Lahtaw Brang Shawng
ngu ai sagu kasha langai hpe nhkru ai matse labye chyahkyawn niedun
garawt ashep zingri mat wa ya ai hkrum sai. Ngam nga ai sagu jahku shi
jahku ni mung, myit kaji let, hkrit gari let, hkrap myitprwi hte nga
taw masai. Dai aten hta SAGU REM KAJA ni law law wa woi awn nhtawm mat
mat ai sagu kasha LAHTAW BRANG SHAWNG hpe hkan tam shakut shaja nga ma
ai hpe mu lu nga saga ai re. Lahtaw Brang Shawng hpe bai mu la na, bai
n mu la na gaw, Sagu Madu rai nga ai Karai Kasang she chye sai. Rai
ti mung Karai KasangaSape Mayam rai nga ai Sugu Rem Kaja ni chyawm
gaw, tinangaang ai lit hpe kangka ai hte gun hpai shakut shaja ai
hpe mu lu ai majaw, nachying wa myit dik myit pyaw kamhpa ai lam hpe
hkam la lu saga ai re. Karai Kasangahkrung ai Mungga hpe mung
kamsham let chyeju dum nga ga ai re. Manoi manat let asak hkrung nga
ga ai re. Jahtum du hkra kamhpa manoi manat nga na ga ai re.
Sagu rem kaja ngu ai ni nga ai zawn, sawt ai sagu rem ni mung nga ai
hpe mu lu ai. Tinang hkam la ai ga sadi hpe n shatup ai; n shateng ai,
n hkan sa ai sha, tinangaahkaw ahkang lama ma tat sum hkalut kau na
hpe tsang ai majaw, Yuda Iskarutahkringhtawng hkan ai sawt ai sagu
rem ni mung koi yen mat ai lam ni chye lu ai. Latsa hta na mat mat
ai sagu langai miahkrap kadau ai nsen hpe na nga ninglen n na masu
nna, shingnyenaga jahten rai nga ai ni lawm ai hpe chye lu ai.
Nanhte jaw da ai kumhpa langai nanhte hpe nhtang madun made ga. Mahte
7:22 re. Chyeju kaba sai.
2012, July 15 (Laban)
KNOandau shabra laika 14th July 20102
at 7/16/2012 08:58:00 AM
KnoaNdau Shabra Laika 14th July 2012 f
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သုိ့ ကေဘီစီမှပေးစာ (KBC)
at 7/16/2012 08:55:00 AM
Kachin State Leadership and Relief Team Training –...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် မြန်မာအစိုးရမှ ကြံစီဖန်တီး၍ ...
Myitrum manang ni, “ဘယ်ရပ်ဌာနီ အဆက် - ၄” shagun da...
Myitrum manang ni, ဘယ်ရပ် ဌာနီ (အဆက် - ၃) shagun d...
Myitrum manang ni, “ဘယ်ရပ်ဌာနီ (အဆက် - ၂)” shagun...
SAGU REM KAJA NGU AI KANING RE AI NI HPE NGA MA T...
Hpaji shatai, hparat ahkrai, bai tsun kajai, htawn...
Lapyin bai jat ga
KIO နှငျ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးဖွဈဖို့ စဈတပျက အခရာကတြ...
Shing du de
Myen hpe nmai kam
Myit yu ai
Public Demonstration in Myitkyina - Kachin State -...
Sadi Dung Kangka
Myuamatu tawk hprut masin